သူမ မသိလိုကျတဲ့အခြိနျမှာ နတေိုးက ဗီဒီယိုရိုကျပွီးဆေးထိုးခံလိုကျရကွောငျး ပွောပွလာတဲ့ အေးမွဖွူ – Sport Gaber
ပရိသတ်ကြီးရေ အဆိုရော သရုပ်ဆောင်ပါ ပိုင်နိုင် သူလေး အေးမြဖြူကိုတော့ အထူးအထွေ မိတ်ဆက်ပေးစရာမလိုအောင် ချစ်ခင်ရင်းနှီးပြီးသားဖြစ်မယ် ထင်ပါတယ်.။ အေးမြဖြူကတော့ ငယ်ငယ်လေးတည်းက အနုပညာအလုပ်တွေနဲ့ မစိမ်းသူ ကလေးသရုပ်ဆောင် အဖြစ်နဲ့ရော ဆိုကရေးတီး မှာ ဆုရရှိသူလေး အဖြစ်နဲ့ပါ ပရိသတ်တွေရဲ့ အားပေး မှုတွေကို ရရှိထားသူလေးပဲဖြစ်ပါတယ်နော်။.
မကြာသေးမီကမှ Myanmar Idol Season(4)ရဲ့ Runner Up တစ်ယောက်ဖြစ်လာပြီး အနုပညာအလုပ်တွေကို အဆက်မပြတ် လုပ်ကိုင်နေရသူလေးပဲဖြစ်ပါတယ်နော်.။ အသက်ငယ်ငယ်လေးနဲ့ အနုပညာမှာ ဝါရင့်သူလေးတစ်ယောက်ဖြစ်သူ အေးမြဖြူကတော့ သရုပ်ဆောင်ပိုင်းထက် အဆိုပိုင်းကို ပိုအားသန် လာသူလေးပါ.။
လတ်တလောမှာ သူမရဲ့ သီချင်းသစ် MTV တွေ တောက်လျှောက်ထွက်နေပြီး သူမလေးစားအားကျရသူ မင်းသားနေတိုးနဲ့ သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ MTV နောက်ကွယ်က ပုံရိပ်တွေကို နေတိုးက ဗီဒီယိုဖိုင်လေးနဲ့ ချပြချိန်မှ သူမကို ဆေးထိုးထားမှန်းသိရလို့ အေးမြဖြူက “U NAY TOE SAYY HTOE KYAWN B YITE HTAR MHAN MA THI THAW MOE THO” ဆိုပြီး သူမရဲ့ My Day မှာ တင်လာခဲ့ပါတယ်.။
မင်းသားနေတိုးရဲ့ ဆေးထိုးကာ ဗီဒီယိုရိုက်ထားတာလေးကို မိုးသိုလေးက သူမရဲ့My Day မှာ ပြန်တင်လာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါ တယ်နော်.။ ပရိသတ်ကြီးအတွက်လည်း ဗီဒီယိုလေးကို ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်.။ ဖတ်ရှု့ပေးခဲ့ကြတဲ့ ပရိသတ်ကြီးလည်း ပျော်ရွှင်သာယာတဲ့ နေ့လေးတစ်နေ့ကို ပိုင်ဆိ်ုင်နိုင်ကြပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်.။
Source: Aye Mya Phyu’s Facebook
ပရိသတျကွီးရေ အဆိုရော သရုပျဆောငျပါ ပိုငျနိုငျ သူလေး အေးမွဖွူကိုတော့ အထူးအထှေ မိတျဆကျပေးစရာမလိုအောငျ ခဈြခငျရငျးနှီးပွီးသားဖွဈမယျ ထငျပါတယျ.။ အေးမွဖွူကတော့ ငယျငယျလေးတညျးက အနုပညာအလုပျတှနေဲ့ မစိမျးသူ ကလေးသရုပျဆောငျ အဖွဈနဲ့ရော ဆိုကရေးတီး မှာ ဆုရရှိသူလေး အဖွဈနဲ့ပါ ပရိသတျတှရေဲ့ အားပေး မှုတှကေို ရရှိထားသူလေးပဲဖွဈပါတယျနျော။.
မကွာသေးမီကမှ Myanmar Idol Season(4)ရဲ့ Runner Up တဈယောကျဖွဈလာပွီး အနုပညာအလုပျတှကေို အဆကျမပွတျ လုပျကိုငျနရေသူလေးပဲဖွဈပါတယျနျော.။ အသကျငယျငယျလေးနဲ့ အနုပညာမှာ ဝါရငျ့သူလေးတဈယောကျဖွဈသူ အေးမွဖွူကတော့ သရုပျဆောငျပိုငျးထကျ အဆိုပိုငျးကို ပိုအားသနျ လာသူလေးပါ.။
လတျတလောမှာ သူမရဲ့ သီခငျြးသဈ MTV တှေ တောကျလြှောကျထှကျနပွေီး သူမလေးစားအားကရြသူ မငျးသားနတေိုးနဲ့ သရုပျဆောငျထားတဲ့ MTV နောကျကှယျက ပုံရိပျတှကေို နတေိုးက ဗီဒီယိုဖိုငျလေးနဲ့ ခပြွခြိနျမှ သူမကို ဆေးထိုးထားမှနျးသိရလို့ အေးမွဖွူက “U NAY TOE SAYY HTOE KYAWN B YITE HTAR MHAN MA THI THAW MOE THO” ဆိုပွီး သူမရဲ့ My Day မှာ တငျလာခဲ့ပါတယျ.။
မငျးသားနတေိုးရဲ့ ဆေးထိုးကာ ဗီဒီယိုရိုကျထားတာလေးကို မိုးသိုလေးက သူမရဲ့My Day မှာ ပွနျတငျလာခဲ့တာပဲဖွဈပါ တယျနျော.။ ပရိသတျကွီးအတှကျလညျး ဗီဒီယိုလေးကို ပွနျလညျမြှဝပေေးလိုကျပါတယျ.။ ဖတျရှု့ပေးခဲ့ကွတဲ့ ပရိသတျကွီးလညျး ပြျောရှငျသာယာတဲ့ နလေ့ေးတဈနကေို့ ပိုငျဆျိုငျနိုငျကွပါစလေို့ ဆုတောငျးပေးလိုကျပါတယျ.။